Email Nnweta Email na ihe ngosi | Martech Zone
Fraịde, Jenụwarị 20, 2012 Fraịde, Jenụwarị 20, 2012 Douglas Karr
Email na-aga n'ihu na-abụ ike na-achịkwa na ụlọ ọrụ ahịa n'ịntanetị. Ọ bụ ezie na teknụzụ etinyela onwe ya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ ọ bụla nke ịre ahịa n'ịntanetị, ozi-e yiri ka ọ bụ nke na-esiteghị n'afọ iri abụọ. Ọganihu ndị na-adịbeghị anya na ọnụ ọnụ akụrụngwa ahịa na-atọ ụtọ, mana nnweta, ikike na SPAM ka na-ebute nsogbu nke ụlọ ọrụ ahụ.
Iwuli akwa ọdịnaya na email dị mkpa bụ akụkụ dị mfe… akụkụ kachasị sie ike ka nnweta. Iwulite ezigbo ahia ahia nwere ike isi ike. Site na nnukwu mpịakọta nke SPAM, ndị ahịa na-echekwa adreesị email ha nke ọma ma na-ala azụ n'ịkesa ya. Icingbanye mmadụ imeri nke a nwere ike ịbụ ezigbo ihe ịma aka, yabụ gịnị bụ ahịa iji mee?
Na Disemba, Ogwu Ugbo kwuputara ihe akaebe n'etiti ndi mmeri mmeri nke Global 100. ihe akaebe bụ nke mbụ nnweta nnweta ozi mgbasa ozi na-agbanwe, na-eji teknụzụ ezubere iche maka omume iji kwado ozi ịntanetị na ihe ndekọ kachasị mma, nke mere na ndị nwe ndepụta nwere ike "ziga obere ma ritekwu ego," na-etinye ego na ndepụta ha na iguzosi ike n'ezi ihe mgbe ndị mgbasa ozi na-ahụ ROI dị mma.
Nke a bụ ọmụmaatụ email… onye mgbasa ozi bụ Ford na onye njikwa ndepụta bụ Jikọọ na Ndụ, saịtị na-ejikọ ndị ahịa na Real Estate, Home Mmezi na Auto na-ere ahịa.
Nke a abụghị nanị a onye nke atọ mgbasa ozi. Ejiri nlezianya dozie ọdịnaya ahụ ma dakọtara ya na ndị na-ege ntị iji hụ na njikwa ndepụta adịghị n'ihe egwu ịhapụ onye debanyere aha ya. Ebe ọ bụ na ọdịnaya ahụ dabara na ndị na-ege ntị na nke ọzọ, ihe akaebe na-enweta oke-pịa site na ọnụego site na usoro ntinye akwụkwọ na-echere, nke a na-akpọ @rank. A na-eji @rank enye akara kacha mma maka ọnụahịa a marketer dị njikere ịkwụ.
Ntughari di iche iche gunyere:
@brada mmekọrita - akara a na-etinye otu profaịlụ dị nso na ụlọ ọrụ ma ọ bụ akara. A na-eji ederede a maka iche na ndepụta ndepụta na profaịlụ.
@campe àgwà - Akara a dabere na arụmọrụ nke mkpọsa nnweta na-agba na netwọkụ egosi. Can nwere ike ịkọwapụta mkpọsa gị megide akụkọ ihe mere eme gị na arụmọrụ arụmọrụ ahịa.
@ikekwe - Nke a ruru na-egosiputa ọnụọgụ email nke enwere ike inyefe ya na ihe ziri ezi karịa oge. Ejikọtara ya na usoro nke ikike ịre ahịa na nrụgide ahịa.
A na-enye ndị mgbasa ozi na ndị njikwa ndepụta nghọta na ọnụọgụgụ - eserese ọnụọgụ (ihe atụ dị n'elu egosighi nsuso nhọrọ nhọrọ) yana dashboard yana njirimara ngosipụta niile.
Nke kachasị dị, a na-edebe data ndị debanyere aha na nzuzo ma ghara iru ya site n'aka ndị nkwusa. ividence-arụsi ọrụ ike iji hụ na ndị nkwusa na-nyere na oké ọdịnaya na ha na-ege ntị ga-enwe ekele… na-akpọsa ngwá ahịa na-gụrụ mkpa ndị debanyere aha ga-achọ meghachi omume na-enye. ihe akaebe na-arụkwa ọrụ iji nweta ihe ka elu ozi nnapụta email.
Tags: nnweta emailemail mgbasa oziemail Marketingihe akaebennweta nnwetaatọ mgbasa ozi email